वान डे सिरिजः अष्ट्रेलिया विरुद्धको २ खेलमा धोनीलाई विश्राम - Everest Dainik - News from Nepal
वान डे सिरिजः अष्ट्रेलिया विरुद्धको २ खेलमा धोनीलाई विश्राम
काठमाडौं, फागुन २५ । अष्ट्रेलिया विरुद्धको एकदिवसीय सिरिजको अन्तिम दुई खेलमा भारतले पूर्व कप्तान तथा विकेटकिपर महेन्द्रसिंह धोनीलाई विश्राम दिएको छ । राँचीमा गएराति सम्पन्न तेस्रो एकदिवसीयपछि धोनीलाई आगामी दुई खेलका लागि भने विश्राम दिइएको हो ।
उनको स्थानमा ऋषभ पन्तले विकेटकिपिङ्ग गर्नेछन्। पाँच खेलको सिरिजमा भारत २ १ ले अगाडि छ । भारतले अष्ट्रेलियाविरुद्ध १० मार्चमा मोहाली र १३ मार्चमा नयाँ दिल्लीमा खेल्नेछ।
याे पनि पढ्नुस अष्ट्रेलियाको खराब शुरुवात, खाता नखोल्दै कप्तान आउट !
आउँदो अक्टोबरसम्म भारतको कुनैपनि देशविरुद्ध श्रृंखला नभएकाले धोनीले विश्वकप बाहेक अन्तिम खेल खेलेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। इग्ल्याण्ड र वेल्समा आउदो मे ३० तारेखदेखि जुलाई १४ सम्म हुने विश्वकपमा भने धोनी भारतीय टिमको सदस्य हुनेछन्।
ट्याग्स: Australia Vs. India, Mahendrasingh Dhoni
युवराज पारस शाह एक्कासी किन भए अस्पताल भर्ना ?
चीनमा शक्तिशाली भूकम्प
तनहुँ पहिरोः पुरिएर दुईको मृत्यु, पाँच बेपत्ता